Xildhibaan Mahad Salad: Farmaajo waa inuu Baarlamanka ka hore sheego wuxuu kenya kula heshiiyey - Awdinle Online
Xildhibaan Mahad Salad: Farmaajo waa inuu Baarlamanka ka hore sheego wuxuu kenya kula heshiiyey
Madaxweyne Farmaajo cid ka aqrisanaysa in uu dhuunto majirto ee inta Ummadda hor yimaado ha u sheego waxa uu Kenya kula heshiiyay!
Warsaxaafadeedka galabta ka soo kala baxay Madaxtooyada iyo Wasaarada Arrimaha Dibeda Kenya waxa lagu sheegay in labada Madaxweyne Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo iyo Uhuru ku heshiiyeen in arinta dacwada Badda ee taala Maxkamadda Cadaalada Adduunka (ICJ) lagu xaliyo hab labada dhinac wada oggolyihiin. Taasoo micnaheedu yahay in dacwada Badda la soo celiyo kadibna wada hadal lagu xaliyo.
Haddaba, waan aragnay mowqifka rasmiga ah ee dowlada Kenya waxaan ka codsanaynaa Madaxweyne Farmaajo in uu Ummadda hor yimaado runtana ka sheego waxa dowlada Kenya uu kula heshiiyay. Arintaan waa arin masiiri ah oo qaranimada Soomaaliya taabanaysa, mana jirto cid ka aqrisanaysa Madaxweynaha inta qolkiisa hoosta ka xirto in aamusnaan iyo dhuumasho uu Ummadda ku siro!
Previous articleSawiro: Maxay ka wada Hadleen Farmaajo iyo Uhuru
Next articleMaxaa ka jira in Kenya iyo Somalia ay wada ogolaaday in arinta badda lagu xaliyo hab lagu wada qanci karo